Impiry isan'andro no mila mihinana alika olon-dehibe? | Tontolo alika
Ny alika dia alika tongotra efatra volo izay mety ho lasa sakaizan'ny olona indrindra raha toa ka karakarainy am-panajana sy am-pitiavana. Saingy afaka miteny ihany koa isika fa tsy isalasalana fa tendan-kanina izy matetika. Izay rehetra heverinao fa fihinana dia hanapoaka vava, izay mety ho olana. Noho izany, zava-dehibe tokoa ny hanomezantsika azy ny sakafony, na sakafo (croquette), Barf Diet na Yum Diet.
Saingy…, Fantatrao ve hoe impiry isan'andro no alain'ny olon-dehibe alika? Ny olona sasany manome azy indray mandeha isan'andro, ny olon-kafa aleony manome azy indroa ary ny sasany mamela ny trough feno foana. Inona no safidy tolo-kevitra indrindra?
Amin'ny ankapobeny, hiankina betsaka amin'ny fomba fiainantsika toy ny an'ny volom-borona izany. Betsaka ny olona mandany ora lavitra any an-trano noho ny asa. Izy ireo, ohatra, dia mety tsy afaka mamahana ny alikany indroa na mihoatra isan'andro noho ny tsy fahampian'ny fotoana. Misy kosa, izay miasa ora vitsy na manao izany any an-trano ary manana izany mety hahalala bebe kokoa ny fotoam-pisakafoanan'ny sakaizany volo.
Ka impiry ianao no tsy maintsy manome sakafo azy? Raha te hahalala ny isa marina dia tsy maintsy mieritreritra ny alikantsika isika; izany hoe Biby iray entintsika manao fanatanjahan-tena im-betsaka isan'andro ve izany? Raha izany dia tsara ny manome azy roa na intelo. Fa kosa, raha alika mijanona tsy mandehandeha fotsinyHo ampy ny mihinana iray na farafahakeliny indroa isan'andro. Amin'ity fomba ity dia hijanona amin'ny endrika tsara ianao.
Manantena aho fa nahasoa anao ireto torohevitra ireto. Raha manana fanontaniana ianao dia fantatrao: avelao ireo ao anaty hevitra. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny famahanana kanin, tsindrio eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Impiry isan'andro no mila mihinana alika olon-dehibe?
Ahoana ny fomba hisorohana ny zanako kely tsy harary?